मनमा कोभिडको त्रास होइन मानसिक रुपमा स्वस्थ्य रहौ :राजेश हमाल – List Khabar
Home / समाचार / मनमा कोभिडको त्रास होइन मानसिक रुपमा स्वस्थ्य रहौ :राजेश हमाल
मनमा कोभिडको त्रास होइन मानसिक रुपमा स्वस्थ्य रहौ :राजेश हमाल
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 28 Views
अहिलेको विषम स्थितिमा आफू पनि बचौ र अरुलाइ पनि बचाऔ भन्दै सन्जाल मार्फत आफ्नो रायसल्लाह राख्दै नायक राजेश हमाल ले कसरी आफुलाइ स्वस्थ राख्ने र समय कसरी बिताउने भनेर टिप्सहरु बताएका छन।काम बिहिन बाहिर हिड्नु भन्दा बिभिन्न जोक्स र समाचारहरु हेरेर मानसिक स्वस्थ्य रहनुस।
सामाजिक संजालमा आफ्नो मनको भावना तथा विभिन्न बिषयमा आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्दै आएका नायक राजेश हमालले कोभिडका कारण त्रास फैलिएको अवस्था मा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन् उनले, मानसिक रुपमा स्वस्थ रहनका लागि विभिन्न टिप्स समेत दिएका छन्
नायक राजेश हमालले यो असामान्य परिस्थितीमा मानिस को मानसिकतामा पनि असामान्य प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै यसका लागि होसियार रहन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । नायक हमालले मनलाई हल्का राख्नका लागि आफ्नो ध्यान जुन कुरामा रहन्छ त्यो कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्–‘चाहे त्यो घरको सदस्यहरुसँग बसेर रमाइला कुराहरु शेयर गर्ने, केही जोक्सहरु भन्ने, हाँसी मजाकका कुराहरु गर्ने या तपाइको गार्डेन छ भने त्यहाँ समय बिताउन सक्नुहुन्छ । खाना बनाउन मनपर्छ भने त्यसमा पनि आफूलाई इन्गेज राख्न सक्नुहुन्छ व्यायम गर्नुहोस् ।
सक्नुहुन्छ भने केहीबेर ध्यान गरेर आफ्नो दिमागलाई असाध्यै फ्रेस र पोजिटि भ राखिरहन सक्नुहुन्छ ।’उनले, मानसिक सन्तुलनका लागि सधै सचेत रहन अपिल गरेका छन् । नायक हमालले समाचारमा पनि आफूलाई धेरैबेर नखर्चिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले, समाचार थाहा पाउन एउटा मात्र श्रोतको भर पर्न र अरु समय स्वच्छ ।हावामा हिडडुल गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । हमालले केही कुराहरु लेखेर आफ्ना घरका सदस्य हरुलाई शेयर गर्न सकिने पनि बताएका छन् ।
Previous खाली पेटमा कहिल्यै नखानोस् यस्ता खानेकुरा!!आफ्नो स्वस्त्य राम्रो पार्नुस !
Next लिचीको दाना घाँटीमा अड्किदा ६ महिने बालकको मृत्यु